ONN: Ajjeechaa Dr. Abiy Ahmed Irraatii Aggaamamee Ture Irratii Qophii Addaa, Waxabajjii 28, 2018 – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooONN: Ajjeechaa Dr. Abiy Ahmed Irraatii Aggaamamee Ture Irratii Qophii Addaa, Waxabajjii 28, 2018
ONN: Ajjeechaa Dr. Abiy Ahmed Irraatii Aggaamamee Ture Irratii Qophii Addaa, Waxabajjii 28, 2018
ONN: Waxabajji 28,2018-Mandii
Konkolaataan seeraan ala Ixaana fe’ee adeemu Mandii keessatti tohannoo jala kan ture gubboodhaan hiikame.
Gabaasni nuti arganne akka jedhutti “konkolaataan lakkoofsi isaa 79600 A.A. kod (3) Naanno Benishaangul Gumuz Bidigilu irra Ixaana kuntala 203 ol fe’ee utuu Imaluu, akka lakkoofsa Habashaatti guyyaa gaafa 4/10/2010 qabamee utuu jiru waajjirri Daldalaafi Misooma Gabaa Xalayaa Lakk. 202/dmcr/bul guyya gaafa 5/1 /2010 barraa’ee daldala seeraan alaa jedhee utuu inni Labsi 980/2008 Labsiin akka daangessu ibsa kennanii utuu jiranii waajjirri poolisii aanaa magaalaa Komader Milkessaan Kan Oganamu Qarshii 50000 fudhachuun aangoosatti irkachun Makkalaakayaa EPRDF’n eegsisee hojii hannaa raawwachuudhaan gadhisera” jechuun kan nu gabaasan. Xumura gabaasaa isaaniitiin abbaan qabeenyaa kanaa sabaan Tigiree ta’uus raagessanii jiru.
Mormii Waamicha Hiriira deeggarsaa-Qeerroo Matakkal-Asoosaa-Wambaraa irraa.
Waxabajjii 27, 2018
“Hima Diddu Du’a Diddaa”
Guyyaa gaafa 25/6/2018 naannoo Beenishangul Gumuz, aanaa addaa Maa’oo Koomoo, magaalaa Toongoo jedhamu keessatti walitti bu’insi uumamee ture bifaa fi human dabalachuun gara magaala Asoosaatti guddatee jira. Walitti bu’insa uumame kuni nama keessa hin beekneef haaraa fakkaatuyyuu karoora waggoota dheeraa mootummaan TPLF, aangawoota mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi harcaatuu caasaa Dh.D.U.O duraanii Oromoo ofiin jedhanii akka ta’e erga beekamee turee buleera.
Kunoo egaa yeroo ammaa akka waan sabni Maa’oo Koomoo lola saba biraa irratti banee fi walitti bu’insi uumame fakkeessuun uummaticha da’oo godhachuun lola saba Oromoo irratti xiyyeeffate humni waraanaa liyyuu haayil naannichaa fi TPLF waliin ta’uun duguuggaa sanyii godina Matakkalitti bara 1986A.L.H tti ta’e irra deebi’uun dhugoomsaa jiru. Kuni akka hin taaneef shira irra deddeebi’ee xaxamaa jirus Qeerroon Asoosaa-Wambaraa fi Gaalessaa akeekkachiisaa tureera.
Eelaan daba ummata Oromoo Baha Oromiyaa fi Kibba Oromiyaa ajjeesuun, buqqisuuniifi qabeenya saamuu utuu hin badiin Dhiha Oromiyaattis akkuma karoorfattetti jalqabamee jira. Buqqa’iinsi Oromoota Harargee, Baalee, Gujii fi Booranaa osoo fala hin argatin dabareen Oromoota Onoota Wallaggaa naannoo Beenishaangul daangessan, naannicha keessa jiraatanillee qaqqabde jirti.
Walitti bu’insa kanaan wal qabatee reebbichaa fi dhukaasa Toongootti saba Oromoorratti raawwatameen baay’een ajjeefamanii, kaan madahanii, kaan qe’ee isaaniirraa baqatanii jiru. Warreen Toongoo irraa buqqa’an gara Teenzeetti baqataniiru.
Lola magaalaa Asoosaattii babal’ateenis Lammii biyya Hindii fi barsiisaa Yuuniversiitii Asoosaa Dr. Selvandra dabalatee Oromoonni hedduun Wareegamaniiru. Ta’us Waraanni Bilisummaa Oromoo (WBO) tarkaanfii gitaa fudhateera, fudhachaas jira.
Haa ta’uyyuu malee waraanaa fi lola Humnoota TPLF naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan, mootummaa naannichaa fi jala deemtuu harcaatuu Dh.D.U.O ta’aniin labsame kana qaamni tasgabbeessuu dhabamuunsaa gaaffii uummataa ta’ee jira. Sababaan dhumaatii kanaa deeggrsa MM Dr Abiyiif gochuu irraan kan ka’e utuu beekamuu ammas fuuldura keenya gaafa sambata 23/10/2010 A.L.H tti hiriirri deeggarsaa kuni godinoota Matakkal garaa garaa keessattii waamichi godhamaa jira. Nuti Qeerroon Oromoo naannichaan hiriira deeggarsaa kana shira duguuggaa sanyii ummata Oromoo naannichaa irratti xiyyeeffate waan ta’eef cimsinee ni balaaleffana!
Qaamonni waamicha kana gochaa jiranis warra Qeerroo fi Qabsaa’aa ofiin jedhanii Qeerroo naannichaa karaa social media garaa garaa dogoggorsaa jiran, Miseensota caasaa dulloomaa Dh.D.U.O. duraanii, aangawoota mootummaa naannichaa warra hidhata TPLF qabanii fi Warra aangoof dheebuu cimaa qaban ta’uun beekameera. Kun jechuun karooraa fi shira walitti bu’insaa waggaa dheeraaf fiixaan bahuu dide har’a maqaa deeggarsaan Uummata Oromoo Matakkal irratti Labsii dhumaatii labsaa akka jirtan beeka!
• Uummanni deegarsaaf ba’u kuni hiriira ba’uuf qaamni wabii ta’ee dhumaatii Asoosaa fi Toongootti ta’erraa hambisuu danda’u eenyuu?
Qaamonni adda durummaan shoora kana taphataa jirtan keessumaa warri Oromoo ofiin jettan, hacuuccaa bara dheeraa karaa fi bifa adda addaan uummata Oromoo naannichaa irra gahaa turee fi dhiibbaa suni fide irraan kan ka’e deemsa keessaa fi gorsaan hubannoo keessan cimsitu, ilaalcha keessanis sirreessitu jedhamee amanamuun gorfamaa fi akeekkachiisni bifa garaa garaan isiniif kennamaa ture. Haa ta’uyyuu malee hojii keessani irraa deebi’uu hin dandeenye. Utuu gola ofii hin qulqulleessiin diina ofirraa loluun waan hin yaadamne. Kaayyoon Qeerroo Matakkal-Asoosaa-Wambaraa Mirga abbaa biyyummaa Oromoo naannichaa kabachiisuu, tokkummaa Oromoo ijaaruu fi cimsuu, Saboota cunqurfamoo biroo naannichaa waliin nagaan jiraachuu fi falmachuudha.
Kanaafiyyuu warri Oromoo taatanii daba kana keessaa harka fudhachuu diddan keessumaa warri duula waamicha deeggarsaa karaa garaa garaan gochaa jirtan Qeerroon waliigala Oromiyaa fi Gartuun sonsaa tarkaanfii tokkoon tokkoo keessanirratti fudhatuuf of qopheessuun filannoo dhumaati.
Uummanni Oromoo Matakkalis Waamichi deeggarsaa waamamaa jiru kuni shira akka ta’ee fi dhumaatii Toongoo fi Asoosaa irratti ta’e hojiirra oolchuuf akka ta’e hubatee hiriiraa fi deeggarsa akka hin goonee fi wareegama hin barbaachifne irraa akka of qusatan waamicha goona.
Qeerroo Matakkal-Asoosaa-Wambaraa irraa.
ONN: Waxabajjii 27/2018 Godina Iluu Abbaa Booraa (Buunnoo Baddallee) Magaalaa Baddalleetti Uummatni Oromoofi Qeerroon Dargaggootni Oromoo Sochii Warraaqsaa daran jabeessuun Abbaan Irree Wayyaanee EPRDF aangoo Uummataaf akka gadi lakkisu gaafatan!!
Guyyaa Har’aa Magaalaa Baddalleetti Faajjii Qabsoo Bilisummaa Oromoo alaabaa ABO qabachuun dhaadannoowwaan :
– Kallachi Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABO nu haa bulchuu,
-Abbaan Biyya ABO dha, Abbaan Biyya Oromoodha!!
-Oromiyaan kan tasgabbooftuu ABOn yoo jiraate qofaadha!!
– Ajjeechaan uummata keenyarratti rawwatama jiruu atattamaan haa dhaabbatu!!
-Ajjeechaa bakkoota adda addaatti shira mootummaa xaxee hidhattoota isaa bobbaasuun rawwachaa jirufi gadi jabeessuun balaaleffatan
Gabaasa dabalataan walitti deebina!!
ONN: Oduu Waxabajjii 17, 2020
Oduu ONN (Oromia News Network) Waxabajjii 17, 2020 https://youtu.be/d8LASk9wf-U
ONN: Oduu fi Haasawa Beektota Dinagdee walin- Waxabajjii 4, 2018 (updated)
﻿ ONN: Waxabajji 4,2018-Shaamboo =================== Magaalaa Shaambuu Keessatti Ibsaan Uummatarraa Cituun Walqabatee Hiriirri Mormii Guddaan…
Uuummata nagaa irratti lola bananii nagaa biyyaa booressun amala bineensummaa qaban calaqisiisuudha